Ithegi: ibango lesiseko | Martech Zone
Ithegi: ibango lesiseko
NgoLwesithathu, Aprili 27, 2016 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 29, 2016 Douglas Karr
Siyaqhubeka nokubhala malunga nezibonelelo zeNtengiso esekwe kwiAkhawunti (ABM). Ukuba awuyiqondi ukuba yintoni iABM, sichaze iABM kumanqaku angaphambili kunye namanyathelo ayimfuneko okuphumeza isicwangciso esiphumelelayo seABM. Kukho imingeni ekuphunyezweni kwe-ABM, nangona kunjalo. Ngelixa i-97% yabathengisi be-B2B baxele ukuba ngoku baqhuba okanye bacwangcisa inkqubo ye-ABM kwaye i-60% yabathengisi basebenzisa iABM ukuguqula iiakhawunti ekujolise kuzo ukuba zikhokele okanye amathuba
Ngaba iqela lakho lokuthengisa livakalelwa njani malunga nentengiso yakho? Nanini na xa abathengisi be-B2B bebuzwa loo mbuzo, iimpendulo ziyindalo iphela. Abathengisi baziva ngathi bagoba ngasemva ukuhambisa isixa esikhulu sezikhokelo, kwaye ukuthengisa ngokucacileyo akuziva uthando. Utshintshiselwano luya kwinto enje. Ukuthengisa: Sihambise ii-1,238 zeNtengiso eziKhokhelayo ezifanelekileyo (MQLs) kule kota, 27% ngaphezulu kwenjongo yethu! Ukuthengisa: Asifumani nkxaso siyifunayo. Ukuba oko kuyavakala
Ukubonwa okufunwa nguDemandbase kule infographic, ukuthelekisa ukuthengisa ngokwesiko kwe-B2B ukujolisa kwintengiso yeakhawunti kuyinto entle. Ngelixa ukuthengisa ngaphakathi kungenisa ukufumana abantu abafanelekileyo kwindawo yakho, kusekho iprofayili ekhoyo kumxhasi wakho ofanelekileyo ekufuneka elandelwe. Ukuchonga abantu abafika kwindawo yakho kunye nokufumana idatha ye-firmagraphic (yeempawu zeshishini) kwimizi-mveliso yabo, ubudala, ingeniso, inani labasebenzi, njl.njl. Inokukunceda ukubeka phambili izinto zakho